Faah Faahin:- Safarka Madaxweyne Xasan Sheekh Uu Ku Tagay Magaalada Kismaayo (Sawirro) – Goobjoog News
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubada Hoose waxaa maanta gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka mid ah Labada gole ee dowladda.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa garoonka magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo xubno ka mid ah maamulkiisa.
Intaasi ka dib ayaa waxaa loo soo galbiyay Madaxweyne Xasan Sheekh dhanka madaxtooyada Jubba, iyadoo sidoo kale uu halkaasi kula kulmay wasiirada arimaha dibadda dalalka Kenya iyo Itoobiya oo iyaguna maanta halkaasi soo gaaray.
Ammaanka magaalada Kismaayo ayaa maanta guud ahaan ah mid ay adkeeyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland, waxaana wado walba lagu arkayaa ciidanka Booliiska iyo kuwa Milatariga.
Safarka madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasiirada ka socda dalalka Itoobiya iyo Kenya ay ku tageen magaalada Kismaayo ayaa imaanaya xilli Odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin ay sheegeen in aan loo dhameyn baarlamaanka cusub ee Jubbaland.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan gudoonka Baarlamaanka waxa ay u gudbiyeen mooshin ka dhan ah baarlamaanka cusub ee Jubbaland, iyaga oo sheegay in baarlamaankaasi aysan u dhameyn shacabka degan gobalada Jubooyinka iyo Gedo.